Warsaxaafadeed uu soo saaray Guddoomiyaha Siyaasada Xisbiga UDUB | WWW.SOMALILAND.NO
Warsaxaafadeed uu soo saaray Guddoomiyaha Siyaasada Xisbiga UDUB
Waxa dalka Somaliland booqosho ku yimi wefdi ka socda Safaarada Faransiiska ku lee dahay dalka Djibouti, 17/02/08. Wefdiga waxa hogaaminayey Thierry Choinier oo ah Premier Secretary of Republic of France Embassy in Djibouti. Waxa kulan wada jir ah la yeeshay wefdiga 18/02/08 Saddexda xisbi qaran ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland. Mr. Thierry oo uga waramayey ujeedada safarkiisa ayaa sheegay inay ku yimaadeen booqasho rasmi ah ayna rabaan inay wax ka ogaadaan bal sida ay u qabsoomayaan doorashooyinka ka dhici doona Somaliland sanadka dabayaaqadiisa.” Waanu la soconaa wax yaabaha wanaagsan ee ka socda Somaliland” ayuu yidhi diblomasiga fransiisku.
Waxanu u sheegnay diblomaasiga faransiiska taariikhda soo jireenka ah ee Somaliland, waxa kale oo aanu kala hadalay sida beesha caalamku
Aqoosiga Somaliland u hagratay,iyo sida beesha caalamku ugu xidhayso Somaliland inay wada hadlaan Dawladda ku meel gaadhka ah ee Somaliya “ Yaanu la hadalaa, waa la og yahay waxa ka socda Somaliya dagaalo, barakac iyo murug siyaasadeed. Ma waxa la doonayaa inaanu qayb ka noqono burbrurka iyo dagaalada ka jira Somaliya. Waxanu ka codsanaynaa dawladiina inaad hormood ka noqotaan aqoonsiga Somaliland.
Waxa dawladaha qaar nagu yidhaahdaan horta ha naga horeeyaan dawladaha Midowga Africa, waxa doraad madax bannaanidooda ku dhawaaqay Kosovo iyagoo ka go’day Serbia oo aan raali ka ahayn inay ka go’do. Way ku kala jabeen dawladaha midowga Yurub. Waxa markiiba aqoonsaday Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga Ingiriiska iyo Maraykankuba, kuma aanay xidhin inay wada hadlaan Serbiya, kuma aysan xidhan inay kala tashanayaan dawladaha midowga Yurub oo ku kala q aybsamay. Waxanu rajaynaynaa inay taasi wadada u xaadhi karto in Somaliland si toos ah loo aqoonsado oo cidii na danaynaysaa nagu xidhin cid kale.
waxa kale oo aanu uga waranay inay socoto sidii loogu diyaar garoobayey doorashooyinka soo socda, waxanuu u xaqiijinay inay bilaababmayso hawshii diinwaan gelinta codbixiyayaashu, Guddiga doorashooyinka qaranka iyo Xisbiyaduna u safrayaan dhowaan gobolada si ay u soo dhisaan gudiyada doorashooyinka ee gobolada iyo degmooyinka. Waxanu u sheegnay inay wadanka ka qabsoomayso doorasho xor ah oo Xalaal oo waqtigeeda dhacda, sidaanu hore ugu wada heshiinay dhamman xisbiyada, Komishanka doorashada iyo dawladuba.
Waxa kale oo aanu uga waranay xaalada nabad gelyada wadanka iyo inaanu taageero uga baahan nahay beesha caalamka sidii aanu u adkayn lahayn nabad gelyada. Waxanu kale oo uga waranay in nabad gelyada Somaliland ay khatar ku hayso kooxaha wax afduuba, taas oo aanu u baahan nahay in nalaga caawiyo dhinaca, sida nabad gelyada booliiska oo naloo qalabeeyo xagga gaadiidka, tababarka, iyo isgaadhsiintaba si ay ugu suurto gasho inay xasladaan nabad gelyada.
Waxanu toos u weydiinay diblomaasiga bal mawqifka dawladda Faransiisku ka taagan tahay aqoonsiga Somaliland, waxuna noogu jawaabay inay dawlada faransiiku ka shaqyanayso hadda sidii Somaliland loo aqoonsan lahaa, waana mid naga go’an sidii aanu uga hawl geli lahayn sida dawladaha Maraykanka iyo Ingriiskuba uga shaqaynayaan hadda.
Cumar Jama Farah
Guddoomiyaha Siyaasada Xisbiga UDUB.
« Waftigii Mad. Rayaale oo Si Wayn Loogu Soo Jaweeyay Dalka Imaaraatka Iyo Diyaar Garowga Jaaliyada Somaliland Qurbo-joogga SL ee wadamada khaliijka oo madaxweynaha uga digay u saxeexida heshiisyo shidaal baadhiseed shirkadaha sharciyadooda aan la hubin oo xafiisyo uga furan yihiin dalalkan »